Statement on Military Clique’s Election Laws
2. The laws eliminate all the political parties, including the NLD and the ethnic parties, failing to follow the rules and regulations, imposed one-sidedly by the SPDC, and unfairly limit participation of the public in politics. […]
March 13, 2010 • By National Democratic Front • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, National Democratic Front • Read more ➤
သတင်းစာဆရာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၃၁၈ မျက်နှာပါရှိပြီး ရက်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော် ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံများကို ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ ‘ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ’ စာအုပ်ကို ဆရာကြီးရဲ့ အသက် (၈၀) ပြည့် မွေးနေ့ (၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့) မှာ စတင်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ က စီစဉ်ထုတ်ဝေပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) က တာဝန်ယူ ဖြန့်ချိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အခန်းငယ် ၁၀ ခန်းနဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း ၄၂ ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဆရာက မကြောက်တရားကို အခြေခံပြီး ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများကို […]
March 12, 2010 • By Assistance Association for Political Prisoners-Burma • Tags: Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Burmese, Political Prisoners • Read more ➤
နအဖစစ်အုပ်စု၏ ၂၀၁၀ ရွေးကေက်ပွဲကို လုံးဝဆန့်ကျင်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှသဘေားထားထုပ်ပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၏ သဘောထားထုပ်ပြန်ချက်တွင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်သူလူထုဆန္ဒနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်် လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ကြောင်း စသည့်အချက်များ အပါအဝင် ယခုပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲအား ရခိုင်ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအနေနှင့် လူမျိုးစုံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် လက်တွဲကာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အစွမ်းကုန် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သွားကြပါရန်လည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ထားပါသည်။
March 10, 2010 • By Arakan Liberation Party • Tags: 2010 Elections, Arakan Liberation Party, Burmese • Read more ➤
The Union Election Commission Law (2010)
The full text of the SPDC’s Union Election Commission Law, passed prior to the 2010 Elections, in English and Burmese.
March 8, 2010 • Tags: Burmese, Law Full Text • Read more ➤
Every year on the 8th of March, women all over the world commemorate the International Women’s Day for the advancement of the lives of women and the elimination of all forms of discrimination and oppression. However, in Burma we are not allowed to observe this day.
Asasignatory country of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Burmese junta has an obligation to promote, protect and fulfill the rights of women. However, they are in fact committing all kinds of violence against women and crimes against humanity throughout , in particular in the war zones. […]
March 8, 2010 • By Women’s League of Burma • Tags: Burmese, International Women's Day, Women’s League of Burma • Read more ➤
International Women Day and Burma’s Women Political Prisoners
On International Women’s Day, AAPP has releasedabrief on the women political prisoners. The brief shows that there are women from all across Burma and from various sectors of society, who are imprisoned for their political beliefs. There are women in prison as young as 21 and as old as 68. The brief also […]
March 8, 2010 • By Assistance Association for Political Prisoners - Burma • Tags: Assistance Association for Political Prisoners - Burma, Burmese, Political Prisoners, Women • Read more ➤